लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला वली भन्छिन्– मलाई फसाउने षड्यन्त्र भयो
लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमला वलीले आफूलाई बद्नाम गरी फसाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएकी छन् । उनले सापटी रकम लामो समयसम्म फिर्ता नगरेपछि एकराज बस्नेतको घरमा गएको तर कसैलाई कुटपिट नगरेको दाबीसमेत गरिन् ।
राज्यमन्त्री विमलाले अहिले आफू घरमै आराम गरिरहेको बताइन् । दुई दिन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमै बसेर उपचार गराएको र डिस्चार्ज भएपछि दाङस्थित घरमा आराम गरिरहेको उनले रातोपाटीलाई बताइन् ।
विमलाले एकराज बस्नेतले आफूसँग ३५ लाख रुपैयाँ सापटी लगेको र फिर्ता नगरेपछि पैसा उठाउन गएको दाबी गरेकी छन् । ‘सापटी रकम लिनका लागि उसको घरमा गरेको बेला योजनाबद्ध रूपमा मलाई विवादमा ल्याउने काम भएको हो,’ मेडियासँग उनले भनिन् ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको संयोजकत्वमा उक्त घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले छानबिनको काम आगडि बढाएको कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।
‘राज्यमन्त्रीसँग घटनाबारे बुझ्ने काम भइसकेको छ,’ उनले मेडियासँग भने, ‘अन्य पक्ष पनि सम्पर्क गरेर छानबिनको काम अगाडि बढेको छ ।’ प्रदेश सरकारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता प्रक्रियालाई ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा राखेको स्रोत बताउँछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी सुरेश काफ्लेले राज्यमन्त्री विमलाविरुद्धको जाहेरी दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले सरकारले गठन गरेको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा आगडि बढ्ने बताए ।
‘प्रहरीले पनि आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेको छ तर प्रहरीभन्दा माथिल्लो निकायबाटै समिति बनाएपछि त्यसको रिपोर्टलाई आधार मानेर अघि बढ्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा एकराज बस्नेतकी श्रीमती मिनाले जेठ ३१ गते राज्यमन्त्री विमलाविरुद्ध उजुरी दिएकी हुन् । एकराज भने मिडिया र प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
महिला र बालिकामाथि हातपात गर्ने राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीलाई बर्खास्त गर्न एमालेले माग
महिलालाई कुटपिट गर्ने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री वलीको वयान सुनेपछि प्रहरी नै चकित !
विमला वलीको अर्को लाजमर्दो हर्कत बाहिरियो ,परपुरुषको चक्करले चुर्लुम्म डुबायो !
पल शाह फ’रार, जाहेरीपछि पी’डित गायिका लाईभ , रुँ’दै भन्छिन्,”बार्गेनिङ हैन, माया गरेकी हुँ” (भिडियो सहित हेर्नुस )